नमुना क्षेत्र बनाउनेछु – Rajdhani Daily
नमुना क्षेत्र बनाउनेछु
वाम गठबन्धन उम्मेदवार, काठमाडौं–२
तपाईं अघिल्लोपटक रौतहटबाट प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो, यसपटक किन काठमाडौं नि ?
म ३४ वर्षदेखि कोटेश्वरको स्थायी बासिन्दा हुँ । रौतहटमा जन्मिएँ, हुर्किएँ । तर पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा तराई र काठमाडौं दुवैलाई राजनीतिक कर्मथलो बनाएको छु । राजनीतिमा को कहाँ जन्मियो, हुर्कियो भन्ने कुरा ठूलो विषय होइन । महŒवपूर्ण कुरा उसले निष्ठाकासाथ के कति योगदान पु¥यायो, जनताको हितमा कति काम ग¥यो, सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनमा र सिंगो राष्ट्रको विकास निर्माणको अगुवाइ गर्ने सन्दर्भमा कसले कति योगदान पु¥यायो भन्ने हो । विकास निर्माणका काममा पनि रौतहट र काठमाडौं दुवै जिल्लामा निरन्तर खटिरहेको छु ।
चुनाव जित्न सहज भएकाले काठमाडौंमा तपाईंको उम्मेदवारी परेको त होइन ?
यो क्षेत्र २०४८ देखि नै वामपन्थीको किल्ला हो । त्यसैले सहज र असहज भन्ने प्रश्नै रहेन । मेरो चिन्ता र सपना–आर्थिक रूपले सम्पन्न समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने हो, साथै काठमाडौं–२ लाई नमुना क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने हो । यस काममा म हिजो पनि क्रियाशील थिएँ, आज पनि छु र भोलि पनि निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहनेछु ।
हिजो पार्टीले दुईओटा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित उम्मेदवारले बढी मतान्तरमा जितेको निर्वाचित क्षेत्र छाडेर कम मतान्तरमा जितेको क्षेत्र नछाड्ने नीति लियो । पार्टी प्रमुख भइसकेको व्यक्ति तराईबाट निर्वाचित भएकोले राष्ट्रिय सन्देशका हिसाबले तत्काल रौतहट छाड्न नहुने स्थायी समितिले निर्णय ग¥यो । त्यसैले करिब १० हजार मतान्तरमा विजयी बनेको काठमाडौं–२ कानुनी र प्राविधिक हिसाबले छाडेको हो । तर क्षेत्र नम्बर २ का जनताको विश्वास जितेको जनप्रतिनिधिको हैसियतमा यहाँका समस्या समाधान गर्ने, विकास निर्माणका काममा अगुवाई गर्ने मात्र होइन, भावनात्मक रूपमा म कहिल्यै पनि अलग भइनँ, निरन्तर क्रियाशील छु ।
कस्तो एजेन्डा बोकेर प्रचारमा हुनुहुन्छ ?
काठमाडौं–२ ऐतिहासिक, धार्मिक–सांस्कृतिक र पयर्टकीय दृष्टिले सम्पन्न छ । यो क्षेत्रको विकासका लागि गुरुयोजनाका साथ काम गर्ने मेरो योजना छ । म प्रधानमन्त्री भएको बेला सडक विस्तार, पूर्वाधार विकास, प्राविधिक शिक्षालय, पोलिटेक्निक कलेजको स्थापनालगायतका धेरै काम भएका छन् ।
भूकम्पपछि क्षत–विक्षत बनेको साँखु क्षेत्रको ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण र विकासका लागि पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनेतर्फ मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ । शंखरापुर–साँखु राजधानी काठमाडौंलाई चीनको तिब्बतसँग जोड्ने महŒवपूर्ण ऐतिहासिक पुरानो व्यापारिक नाका पनि हो । त्यहाँको सडकलाई चीनसम्म विस्तार गर्ने, साँखुमा भृकुटीको ठूलो मूर्ति स्थापना गरेर आन्तरिक र बाह्य पयर्टकको आकर्षण केन्द्र बनाउने, शालीनदीको संरक्षण गर्दै ऐतिहासिक धार्मिक र पयर्टकीय नगरका रूपमा विकास गर्ने, नाङ्लेभारे–जहरसिंहपौवा–लप्सीफेदी क्षेत्रलाई ‘कृषि उत्पादन जोन’का रूपमा संरक्षित गर्दै विकास गर्ने योजना छन् ।
यो क्षेत्रलाई पयर्टकीय गन्तव्यस्थलमा परिणत गर्ने, कागेश्वरी मनोहरा र शंखरापुर नगरपालिकालाई आधुनिक ‘स्याटलाइट स्मार्ट सिटी’का रूपमा विकास गर्ने, मूलपानीको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको काम छिटो सम्पन्न गर्ने, एयरपोर्टको जग्गा अधिग्रहणमा परेका पुरानो सिनामंगल र जडिबुटी क्षेत्रका जनतालाई छिटोभन्दा छिटो उचित मुआब्जासहित पुनःस्थापित गर्ने मेरो योजना रहेको छ ।
त्यस्तै, तिनकुनेको जग्गाको उचित मुआब्जा दिलाउने, कोटेश्वर क्षेत्रको खानेपानीलगायतको समस्या समाधान गर्ने, मनोहरा कोरिडोर निर्माण सम्पन्न गरी हरित क्षेत्रका रूपमा विकसा गर्ने, प्रत्येक वडा र टोलका सार्वजनिक जग्गाहरूमा वृद्ध–वृद्धाहरूका लागि चिकित्सा सेवासहितको आश्रम, बाल उद्यान निर्माण गर्ने, यस क्षेत्रको उपयुक्त स्थानमा आधुनिक चिकित्सा सेवासहितको अस्पताल निर्माण गर्ने, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन विस्तार गर्दै मेलम्चीको खानेपानी उपलब्ध गराउन पहल गर्नेलगायतका विषयलाई मैले योजनाका रूपमा अघि सारेको छु ।
प्रतिस्पर्धीभन्दा आफूलाई तपाईंले के कारण अब्बल ठान्नुहुन्छ ?
सवाल अब्बल र कमसल भन्ने होइन । सवाल यस क्षेत्रको विकासका निम्ति र समग्र मुलुककै विकासका निम्तिको आवश्यक छ भन्ने हो । मेरो जीवन खुला किताबजस्तै छ । म निष्ठा, इमानदारी, पारदर्शिता, सक्रियता र स्वाभिमानमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुँ । जनविरोधी क्रियाकलापसँग आजसम्म सम्झौता गरेको छैन । राजनीतिक यात्रामा अनेकन घुम्ती पार गर्दै पार्टी र मुलुकको नेतृत्वसमेत सम्हालिसकेको छु । को आवश्यक छ भन्ने पैmसला यस क्षेत्रका जनताले नै दिनुहुनेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु । म निष्क्रिय होइन, निरन्तर सक्रिय जीवन बिताउने गतिशील मान्छे हुँ । समयको प्रवाहसँगै जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । जनताको हरेक दुःख, सुःखसँग गाँसिन चाहन्छु ।
बजारमा चर्चा भएजस्तै तपाईंहरूले साम्यवादी व्यवस्थाका लागि वामपन्थी गठबन्धन गर्नुभएको हो ?
अधिनायकवाद वा साम्यवादी गठबन्धनको यो आरोप केवल पराजित र हतास मानसिकताको अभिव्यक्ति मात्रै हो । के हामीले पनि कांग्रेसको जस्तै लोकतन्त्रको नारा जपेर नागरिक सधैं गरिब तर मुठीभरका व्यक्ति मात्रै धनी र सुखी हुने लोकतन्त्रको व्याख्या गर्नुपर्ने ? हामी सबै नेपाली धनी र सम्पन्न हुने सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र स्थापित गर्न चाहन्छौं । म प्रस्टसँग भन्न चाहान्छु हामी आर्थिक उदारीकरणका डम्फू बजाएर देशका उद्योग–धन्दा र कलकारखानाहरू कौडीका रूपमा बेच्ने, देशको स्वाभिमान समाप्त पार्ने, लाखौं युवालाई खाडी मुलुकको चर्को घाममा श्रम गर्न पठाउने, दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी, हलियालाई सधैं बाँधा मजदुर बनाउने लोकतन्त्रको विपक्षमा छौं । जमिनको वर्गीकरण, कृषिको आधुनिकीकरण गरेर उत्पादकत्व बढाउँदै समुचित वितरण प्रणाली स्थापित गर्ने, देशलाई समुन्नत बनाउने लोकतन्त्रको पक्षमा छौं ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, लोकतन्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यतालाई व्यावहारिक रूपमै स्थापित गर्न चाहन्छौं । शिक्षा नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्दै देशको आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्ने, शिक्षालाई श्रम, सीप र रोजगारसँग जोड्ने अभियानमा छौं, योजनामा छौं । त्यसैले कांग्रेसका नेताहरू वाम गठबन्धनबाट भयभित हुनुभएको छ । म उहाँहरूलाई पराजित मानसिकताले विक्षिप्त बनेर होइन, आफ्ना नीति कार्यक्रम र योजनाका आधारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा उत्रिन आह्वान गर्छु । म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु– आउनुस्, छलफल गरौं, नीति र व्यवहारमा को लोकतन्त्रवादी ? गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता त्यागी र स्थापित नेतालाई पार्टीमा सम्मानजनक व्यवहार गर्न नसक्ने, लोकतन्त्रलाई दरबारमा बुझाउने कांग्रेससँग हामीले अब लोकतन्त्रको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने ? उहाँहरू कुन मुलुकको ? कुन विद्वानको लोकतन्त्र अनुशरण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ? हतास बनेर होइन, धैर्य र शान्त मुद्रामा खुला बहसमा आउन म चुनौती दिन चाहन्छु ।
पार्टी एकता सम्भव छ ?
बिलकुल सम्भव छ । शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट समाजवादसम्म पुग्ने भन्ने तय भइसकेको छ । चुनावलगत्तै विगत आन्दोलनको समीक्षा र बाँकी सैद्धान्तिक प्रश्नहरूको हल गर्नुका साथै सांगठनिक संरचनामा कुरा मिल्ने बित्तिकै एकीकरण सम्पन्न हुनेछ । हामी दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू निक्कै लामो अनुभव, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको ठोस विश्लेषणसहित एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण होस् भन्ने जनताको चाहना र हाम्रो योजना पूरा गर्न एक ढिक्का भएका हौं । सैद्धान्तिक रूपमा एक ठाउँमा उभिसकेपछि को कहाँ रहने ? कसको के भूमिका रहने भन्ने कुरा गौण कुरा हो । जीवन्त पार्टीमा यस्ता धेरै विषय र प्रश्नहरू व्यक्तिको सक्रियता र पहलकदमीले पनि हल हुँदै जानेछ ।
प्रस्तुति : टपेन्द्र कार्की
पाठ्यक्रममा प्राकृतिक विपदको ज्ञान
भानु स्मृति र चन्द्रागिरी समृद्धि